Ryzom: lalao milalao andraikitra an-tserasera lalao maimaimpoana maimaimpoana | Avy amin'ny Linux
Ryzom: lalao milalao andraikitra an-tserasera lalao maimaim-poana sy loharano misokatra
Ryzom dia ianaon kilalao kilalao multiplayer an-tserasera marobe (MMORPG) nofinofy sy nofinofy noforonin'i Nevrax, ity lalao ity loharano maimaimpoana, loharano misokatra ary sehatra fiampitana (Microsoft Windows, OS X ary Linux), ity nahazo alalana tamin'ny GPL, fahazoan-dàlana Creative Commons, ary fiaraha-miasa amin'ny Free Software Foundation hampiantrano trano fitahirizana ny fananana kanto amin'ny lalao.
Ryzom dia iray amin'ireo MMORPG malalaka misokatra ara-barotra: mpanjifa, mpizara, fitaovana ary haino aman-jery, midika izany fa manintona fiarahamonina velona ianao izay manome fanamboarana sy fiasa mihoatra ny azon'ny ekipa anatiny atao.
Ity lalao ity azo vidiana maimaim-poana amin'ny alàlan'ny Steam sy ny Apple Store, na dia zava-dehibe aza ny manamarika fa na dia malalaka sy loharano misokatra aza ny lalaona manana fomba fandoavam-bola (freemium).
Amin'ity fomba ity, ireo izay mandoa vola isam-bolana, telovolana, antsasa-taona na isan-taona dia omena bonus izay amohana ny fampiasa lalao sasany ary omena tombony vitsivitsy: ny fotoana ahafahana mampivelatra ny toetrany ho any amin'ny ambaratonga 250 fa tsy 125, avo roa heny nahazoana ny teboka niainana ary manome alàlana ny fampahalalam-baovao fitehirizana samihafa.
Ny lalao tMitranga amin'ny Atys, planeta mahafinaritra sy tokana, noforonina tamin'ny fitomboan'ny zavamaniry goavambe misy faka be loatra. izany Fonenan'ireo zavamaniry manan-tsaina, ahitra tsy manimba, nefa koa mpiremby.
1 Momba an'i Ryzom
1.1 Fepetra takiana hilalao Ryzom
2 Ahoana ny fametrahana Ryzom amin'ny Linux?
Momba an'i Ryzom
Amin'ny fiandohan'ny lalao afaka misafidy toetra amina iray amin'ireo hazakazaka humanoid efatra monina ianao: Fyros, Matis, Trykers ary Zoraïs, ary misafidy ny hiditra amin'ny iray amin'ireo lalao: ny Kamists the Karavaniers, scout scout.
Ireo zavaboary isan-karazany ao Ryzom dia samy manana ny AI mifototra amin'ny karazany, izany dia ahafahan'izy ireo manao fihetsika tena misy toa ny: fifindra-monina sy ny hetsika ho andiany. Carnivores, ohatra, dia hanafika biby sasantsasany ho an'ny sakafo ary ny biby sasany dia hihaza anaty fonosana.
Ahitana fiovan'ny vanim-potoana sy ny toetr'andro ihany koa ny lalao. Ny vokatry ny toetrandro dia misy ny orana sy ny lanezy ary ny rivotra. Mamatotra ny vanim-potoana sy ny fiovan'ny toetr'andro ny fihetsiky ny biby sy ny fisian'ny fitaovana azo ampiasaina.
Ohatra, ny karazan-katsaka sasany dia tsy azo jinjaina mandritra ny orana lohataona ary tsy azo mandritra ny vanim-potoana hafa na toetr'andro.
Ny toetr'andro dia afaka miova isa-minitra. Ny vanim-potoanan'ny lalao tsirairay (lohataona, fahavaratra, fararano ary ririnina) dia maharitra efatra andro amin'ny tena fotoana.
Mahazo ambaratonga mahaleo tena ny toetra tsirairay amin'ny sehatry ny ady, majika, asa-tanana ary fijinjana miorina amin'ny fitaovam-piadiana amin'ny alàlan'ny fanatanterahana asa mety (famonoana ny fahavalo amin'ny sabatra hiadiana, fanangonana firavaka ho asa-tanana sns.)
Ny ambaratonga tsirairay azo tamin'ny iray amin'ireto saha ireto dia manome ny toetra 10 isa izay azo lany amin'ny fahaizana vaovao manokana ho an'io sehatra io, amin'ny ankapobeny fanatsarana ny toetra, na voatahiry fotsiny.
Fepetra takiana hilalao Ryzom
Ny takiana farafahakeliny izay tsy maintsy ananan'ny solosaintsika ahafahana mampandeha ity lalao ity amin'ny rafitray dia:
Processeur: processeur 1GHz iray
Fahatsiarovana: RAM 2GB
Sary: OpenGL 1.2 miaraka amin'ny VRAM 32MB
Fitehirizana: toerana malalaka 7 GB
Karatra am-peo: mifanentana amin'ny OpenAL
Ary ireo natolotra hanana lalao milamina sy mahafinaritra dia:
Mpandrindra: CPU 2.0GHz na mitovy aminy
Sary: NVIDIA® 6800 misy 256MB RAM / ATI Radeon ™ x800 misy 256MB na tsara kokoa
Fitehirizana: habaka kapila 16 GB maimaim-poana
Fifandraisana an-tserasera broadband.
Ahoana ny fametrahana Ryzom amin'ny Linux?
Araka ny nanamarihana ny lalao azo vidiana amin'ny Steam, raha manana kaonty ianao ary manana ny mpanjifan'ny Steam efa napetraka ao amin'ny rafitrao ihany tsy maintsy mankany amin'ireto ianao rohy ary ampio ny lalao Ryzom ao amin'ny tranombokinao.
Raha vantany vao ampidirina ao amin'ny tranombokin'ny lalao anao ny lalao, azonao atao ny mametraka azy miaraka amin'ny fanampian'ny Steam.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ryzom: lalao milalao andraikitra an-tserasera lalao maimaim-poana sy loharano misokatra
agan dia hoy izy:
Salama maraina, mankasitraka azy aho raha azonao ampiana ny rohy ofisialin'ny Ryzom.com satria azo sintonina avy ao koa, misaotra anao.
Mamaly an'i agan
Linux Kernel 3.2 sy 4.1 dia hifarana, ny mpampiasa anao dia tsy maintsy manavao izao
Rafitra fiasa hafa ho an'ny fitrandrahana nomerika